Ny finday izay havoakan'i Huawei amin'ny taona 2018 dia efa fantatra | Androidsis
Sivanina ireo telefaona havoakan'i Huawei eny an-tsena amin'ny taona 2018
Eder Ferreño | | Huawei, About us
Huawei dia nanjary iray amin'ireo marika malaza eran-tany amin'ny tsena. Ny marika sinoa dia miavaka amin'ny fandefasana telefaona maro eny an-tsena, ho an'ny sehatra rehetra. Tamin'ny taona 2017 dia niverina velona izy ireo taona feno fahombiazana. Zavatra antenain'izy ireo fa haverina amin'ny taona 2018. Na dia asehon'ny zava-drehetra aza.
Betsaka ny tombantombana momba ireo fitaovana izay havoakan'ny orinasa amin'ny taona ho avy. Ny sasany efa azo vinavinaina ho mpandimby ny Huawei P10. Saingy, amin'ny ankapobeny, tsy be pitsopitsony no fantatra. Ankehitriny, ny tondrozotra mampiseho ny fandaharam-panombohan'ny orinasa dia tafaporitsaka.
Misaotra an'ity tondrozotra ity, izay hitanao eto ambany, Huawei dia manomboka amin'ny 2018 dia fantatra. Avy amin'ny zavatra hitantsika ny finday izay hanombohan'ny orinasa amin'ny taona manaraka. Ankoatry ny efa mahalala ny anarany. Na dia tsy naseho aza ny anarana rehetra, satria misy roa amin'izy ireo izay mbola manana anarana kaody.
Tsy isalasalana fa, ny tena nahasarika ny sainy indrindra dia ny fahatongavan'ny Huawei P amin'ny taona 2018. Saingy, tsy mandeha amin'ny 10 ka hatramin'ny 11 ity. Ny anarany dia ho lasa P20 amin'ireo maodely telo (P20, P20 Plus ary P20 Lite). Ka ny avo indrindra amin'ny marika dia mampanantena ny hanome ady.
Manome antsika eritreritra henjana momba ny fandaharam-potoana fandefasana Huawei ny tondrozotra. Ka afaka mahafantatra bebe kokoa na latsaka isika rehefa handona ny tsena ireo telefaona ireo. Raha tsy izany dia tsy manambara fampahalalana be loatra momba ny fitaovana izy io.
Na dia tsara aza ny mahita fa ny taona 2018 dia hoentin'ny orinasa fandefasana azy. Hatramin'izao dia tsy diso fanantenana ny fitaovan'izy ireo ary mitombo hatrany ny varotra. Hihaino tsara ny zava-drehetra isika Huawei handao antsika amin'ny taona 2018.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Sivanina ireo telefaona havoakan'i Huawei eny an-tsena amin'ny taona 2018
Hihaona amin'ny OPPO A83, ilay mpikambana vaovao manana fanekena endrika
Izany no ho endrik'ilay Sony Xperia voalohany tsy misy frame